Mac-kabashada Volume: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Khasaaray Mac Volume
> Resource > Mac > Mac-kabashada Volume: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Khasaaray Mac Volume
Waxaan ka Khasaaray Mac Volume soo kaban karto, Data?
Waxaan si qalad ah la tirtiro mugga on my MacBook. Waxaan ku kaydsan images badan oo muhiim ah, files shaqada, videos iyo Cajalado ku mugga in. Hadda waxay wada. Waxaan ogahay fikrad ku saabsan sida loo soo heli mugga in. Waxaan hubiyaa in aan MacBook mar iyo mar kale. Laakiin waxaan waxba u hesho. Qof ii sheegi kartaa waxa habboon in aan hadda samayn?
Mugga Mac lagu lumin karaa sabab u ula kac ah ama shil tirtirka, formatting drive, musuqmaasuqa ama xitaa dhaawac mugga. Indeed, soo kabashada mugga Mac weli waa marka arrinta dhacaya suurto gal ah. Marka hore u baahan tahay in aad joojiso gelinaya wixii xog ah oo cusub si ay u drive physic in mugga badiyay loo isticmaalaa in lagu helo in ay ka fogaadaan xogta overwritten. Markaas waxaad ka heli kartaa barnaamij awood leh inuu ka soo kabsado mugga lumay on Mac ee internet-ka.
Data Recovery for Mac waa codsi mugga Mac ugu kalsoonaan karo ka soo kabsado haddii aad doorbidayso. Waxay awood u in aad ka bogsato mugga lumay on Mac dhawr qasabno fudud. Sidaa daraadeed, waxaad soo celin karaa nooc file oo dhan ka badiyay / tirtiray / formatted / kharribeen Mac mugga, oo ay ku jiraan images, files audio, videos, waraaqaha, email, archives, iwm interface The fudud iyo kuwo isku mid ah codsiga ka dhigi doonaa kabashada mugga Mac ah piece of cake.
Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah Wondershare Data Recovery for Mac inuu ka soo kabsado xogta laga badiyay mugga Mac hadda. Qalab si buuxda u la jaan qaada dhammaan qalabka Mac sida MacBook, iMac, Mac Mini iyo in ka badan.
Qabtaan Mac Recovery Volume 3 Talaabooyinka
Wax First hore, fadlan ha soo dajiyo barnaamij ku saabsan drive asalka jirka ah ee lumay mugga Mac.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabasho inuu ka soo kabsado mugga lumay on Mac
Kadib markii ay Wondershare Data Recovery for Mac, aad arki doonaa interface barnaamijka soo socda.
Si aad u soo kabashada tirtiray mugga on Mac, fadlan dooro "Recovery ah Barzakh," mode si ay u bilaabaan. Tani waa hab ay awoodaan in ay soo kabsadaan mugga oo dhan lumay.
Tallaabada 2 Sawirka drive la taaban karo si ay u raadiyaan mugga laga badiyay
In tallaabadaas, waxaad u baahan tahay in ay doortaan drive aad ka badiyay mugga si ay u bilaabaan baaritaan loogu mugga laga badiyay.
Dhammaan muda on drive waxaa la ogaan doonaa oo soo bandhigay in uu furmo. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan aad mugga guuldarro iskaan ee dhammaan faylasha waxay ku.
Tallaabada 3 kabsado tirtiray mugga on Mac
Ka dib markii iskaanka, dhammaan waxyaabaha aad badiyay mugga Mac la soo bandhigi doonaa in uu furmo. Waxaad ku eegaan karo iyo hubi faylasha aad rabto inaad qabato dib u soo kabashada.
Fiiro gaar ah: Fadlan badbaadiyo soo kabsado files si drive kale ee aad Mac si looga fogaado in xogta overwritten.